Vhura iyo Apple Watch app ye iPhone> Musoro kune Yangu Yekutarisa tebhu> Tinya pane yako Apple Tarisa kumusoro> Tora pane chiratidzo chemashoko padhuze neApple Watch yako kumusoro> Sarudza Unpair Apple Watch.
Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> Tevedza rairo. Izvo zvakanaka uye zvakapusa, tinovimbisa. Iwe unozotungamirwa kuburikidza nezvose, kubva kuna Siri Siri kuwedzera makadhi eApple Pay. Apple Watch inoshanda chete ne iPhone saka kana uri mushandisi weAroid, haugone kubatanidza Apple Watch kune chako chishandiso.
Kuti utarise kuti urikumhanya yazvino software yeWOSOS, vhura iyo Zvirongwa app pane yako Apple Watch> General> Software Gadziriso. Kana paine software yekuvandudza, ita shuwa kuti yako Apple Watch yakabatana neWi-Fi uye pairi charger uye tinya iyo 'Dhawunirodha uye Isa' bhatani.
Mufananidzo wacho unozochengetwa otomatiki kune ako Mapikicha album pane yako iPhone. Iwe unozofanirwa kuve nechokwadi chekuti 'Kugonesa Screenshots' iripo zvakadaro. Kuti uite izvi, tungamira kuApple Watch app ye iPhone> General> Bhura pasi kuti Enable Screenshot uye uone kuti iri.
Maitiro ekugadzirisa chechitatu bato Matambudziko
Enda kune Apple Watch app ye iPhone uye sarudza 'Matambudziko' mune Yangu Yekutarisa tebhu. Iwe uchaona izvo zvechitatu bato maapplication iwe wawakaisa izvo zvinobvumidza Matambudziko. Aya Matambudziko anozokwanisa kusarudzwa pamhando dzakasiyana dzewachi.
Vhura iyo Apple Watch app ye iPhone> Tinya pane Yangu Yekutarisa tebhu> Dzvanya paWatch yako pamusoro pechiratidziro> Tinya pane chiratidzo chemazita kurudyi kweruzivo rwako rwekutarisa> Tinya pane Tsvaga yangu Apple Tarisa sarudzo. Izvi zvichaburitsa iyo Tsvaga App yangu.
Vhura iyo Apple Watch app pane yako iPhone> Tinya pane Yangu Kutarisa tebhu> App Layout> Kutanga kufambisa madenderedzwa kutenderedza kuti uwane zvaunofarira.
Enda kuchiratidziro cheapp paWatch yako nekudzvanya iyo Dhijitari Crown> Yakareba dzvanya pachiratidziro kusvikira ma icon atanga kusvetuka. Chero maapplication ane 'x' mukona yepamusoro yekona anogona kubviswa. Iwe unogona zvakare kufambisa maapplication kutenderedza nenzira imwecheteyo yaunoita pane yako iPhone uchishandisa ichi chidimbu.
Zviri nyore kuwedzera maapplication kuApple Watch kupfuura zvayaimboita seApple Watch ine App Store mukati WatchOS 6. Dhinda iyo Dhijitari Crown kuti ikuendese iwe kuApple skrini uye wozotarisa chiratidzo cheApp Store.
Iwe unogona zvakare kuwana uye kurodha maapplication matsva eApple Watch yako pane yako iPhone. Vhura iyo Apple Tarisa app ye iPhone> tora pane iyo App Store tebhu muzasi kurudyi> tinya Tsvaga Kuona Zvirongwa pa iPhone> Tsvaga app yaunoda uye tinya 'Get'.
Kana iwe ukaisa Express Kadhi Kadhi, haufanire kupeta kaviri bhatani kuvhura Apple Pay pane yako Apple Watch kana uchifamba neruzhinji rwevanhu. Kamwe iyo Express Yekufamba Kadhi iri setup, iwe unozogona kungobata wachi yako uchipesana neruzhinji rwekutakura yekufambisa chiteshi kuti ubhadharire rwendo rwako.
Kumanikidza Kubata mune Messages inbox pane yako Apple Watch kunyora mutsva meseji.
Iwe unogona kuseta iyo Apple Watch kuti iitumire otomatiki kuverenga maretiiti kana iwe waverenga meseji. Enda kuApple Watch App ye iPhone> Meseji> Chinja Tumira Verenga maRisiti mukati kana kudzima zvichienderana nezvaunoda.
Maitiro ekutumira yako yazvino nzvimbo mune meseji paApple Watch
Unogona kutumira nzvimbo yako yazvino kune chero munhu wauri kutumira mameseji kuburikidza neApple Watch. Kumanikidza pombi pane iMessage uye wobva wasarudza Kutumira Nzvimbo.
Iwe unogona kukurumidza kudzima email kubva kuinbox yako runyorwa nekusvetera kuruboshwe kurudyi pane meseji pane yako Apple Tarisa uye nekukanda iyo tsvuku icon nebin. Iwe unozobva wafanira kusimbisa kudzima.
Iwe unogona kumaka maemail ako nekutsvaira kuruboshwe kurudyi pane meseji paApple Watch uye nekukanda mureza icon.
Unogona kutara email seisina kuverengwa kubva kuApple Watch nekutsvaira kuruboshwe kurudyi pane meseji iri mubhokisi rako rekunyora kana Kumanikidza Bata iyo email kana iwe urimo. Grid yesarudzo ichaonekwa, imwe yacho ndeyekutomaka seisina kuverenga.
Iwe unogona kupindura maemail, kumaka iwo, kumaka iwo seasina kuverenga kana kuadzima paApple Watch. Kuti uite kudaro, Kumanikidza Kubata pachiratidziri pane email yauri kuverenga uye kusarudza kubva pane zvina sarudzo. Kupuruzira pasi pezasi kweemail kunokupawo sarudzo yekupindura.
Kumanikidza Kubata mune Chiitiko app paApple Watch kuti uchinje chinangwa chako chezuva nezuva.
Kumanikidza Kubata kana uri mukarenda app paApple Watch uye sarudza chero zuva rekutarisa kana rondedzero maonero.
Kudzokera nhasi kuApple Watch
Kana iwe wakatsvedza pasi kuburikidza neako akagadzwa pane yako Apple Watch, unogona kudzokera nhasi nekushandisa Force Kubata uye wosarudza Nhasi.
Kumanikidza Kubata pane yakatarisa kumeso pane yako Apple Watch uye wobva wadzvanya 'Gadzirisa'.
Mamwe eApple Watch anotarisa zviso - Infograph uye Ruvara semuenzaniso - anotendera iwe kuratidza monogram yako kumeso.
Kuisa imwe pikicha seyadhi yekurinda pane yako Apple Watch, tsvaga pikicha muMapikicha uye Kumanikidza Kubata pairi kuti ugadzire seWakatarisa Chiso.
Wona kana kuchanaya nhasi uye nguvai
Kumanikidza Kubata paMamiriro ekunze app pane yako Apple Watch kumisikidza dial kuti iratidze mamiriro, mukana wemvura, kana tembiricha zuva rese. Iye zvino unogona kuona kuti kuchanaya na5PM zvakajeka.
Kumanikidza Kubata kana iwe uri pane yekuzivisa pane kuti ubvise Zvese zviziviso pane yako Apple Watch.